Faa'iido mise khasaaro: Muxuu Deni kasoo hooyay doorashadii madaxweynaha? - Caasimada Online
Home Warar Faa’iido mise khasaaro: Muxuu Deni kasoo hooyay doorashadii madaxweynaha?
Faa’iido mise khasaaro: Muxuu Deni kasoo hooyay doorashadii madaxweynaha?
Muqdisho (Caasimada Online) – Saciid Cabdullaahi Deni ayaa kaalinta sadexaad ka galay doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee bartamaha bishaan ka dhacday magaalada Muqdisho.
Saciid Deni waxaa loo arkaa mid kamid ah labada qof ee qarashka ugu badan ku bixiyey doorashadii dhammaatay ee Soomaaliya. Inay xukunka u iibin weyso ma ahan culeys yar.